Manhajka cusub ee iskuullada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Manhajka cusub ee iskuullada
La daabacay måndag 11 oktober 2010 kl 11.16
Wasiirka waxbarashada Jan Björklund ayaa maanta shir jaraa’id ku soo bandhigey manhajka cusub ee waxbarashada kaas oo dhaqan-geli doona xilliga deeyrta ee sanadka 2011-ka.
Manhajkan cusub ee iskuullada ayay dawladdu go’aansatay khamiistii ina dhaaftay in barashada diinta Masiixiga loo daayo kaalinta ay hadda leedahay ahna kaalin ka ballaaran diimaha kale.
Go’aankaa ayaa ka soo hor-jeestay midkii ay soo bandhigtay heeyadda maamulka iskuullada (Skolverket) iyo in la siiyo kaalin inta maanta ka ballaaran diimaha ugu waaweyn ee caalamka.
Wasiirka waxbarashada Jan Björklund oo maanta shir- jaraa’id u qabtay saxaafadda ayaa macneeyay sababta dawladda uu xubinta ka yahay u gaadhay go’aankaa iyo in diinta masiixgu kaalin ka ballaaran ku yeelato xiisadaha barashada diimaha marka loo bar bar dhigo diimaha kale.
- Iyada oo aan loo eegin in ruuxu aaminsan yahay diinta masiixiga iyo inkale, ayay haddana tahay xaqiiq jirta in diinta masiixgu saameeyn ku lahayd dhaqanka iyo caadooyinka dalkan muddo kun sannadood gaareeysa, sidaa daraadeedna ardayda dalku u baahan yihiin iney bartaan. Waa qayb ka mid ah dhaxalka sooyaalka dhaqan ee dalku leeyahay, sida uu sheegay Jan Björklund.
Heeyadda maamulka iskuullada Skolverket ayaa sheegtay inaan maanta la kala caddeeyn karin in ardayda iskuulladu helaan xiisado ey ku bartaan culuun la xiriirta afarta diimood ee kale ee caalamka ugu waaweyn, diinta Yuhuudda, Islaamka, Budiismada iyo Hinduuga, waana arrin nasiibdarro ah, sida ay sheegtay Maria Weståker ahna la-taliye dhanka waxbarashada ee heeyadda maamulka iskuullada.
- May, wax war ah kama aan heyno in loo dhigo dhallaanka iyo in kale. Waana muhiimad in culuuntaa uu ardaygu khaanadda ku sito, kolka uu ka baxayo dugsiga Hoose/dhexe.